लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन आज हुँदै , कसले मार्लान् बाजी ? सत्ता पक्ष र विपक्षबीच प्रतिष्ठाको दोस्रो लडाइँ - Nepal No 1 News - Bishwokhabr.com
लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन आज हुँदै , कसले मार्लान् बाजी ? सत्ता पक्ष र विपक्षबीच प्रतिष्ठाको दोस्रो लडाइँ
काठमाडौं । सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धनको प्रतिष्ठाको विषय बनेको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मतदान आज हुँदै छ । बागमती प्रदेशमा सम्पन्न ६ जेठको उपनिर्वाचनमा पराजय भोगेको सत्तारुढ एमाले लुम्बिनीमा पनि कमजोर देखिएको छ ।
कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले फराकिलो अन्तरले आफ्नो गठबन्धनले चुनाव जित्ने बताए । ‘हामीसँग स्पष्ट रूपमा नै बढी मत छ । चारजना मतदाता थप गरे पनि परिणाममा कुनै प्रभाव पर्दैन,’ खानले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन आयोग कार्यालयले मतदानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । सोमबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदानका लागि दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरभित्रै तीनवटा केन्द्र रहेका छन् । निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार क, ख र ग गरी तीनवटा बुथ तयार पारिएका छन् । जसमध्ये ‘ग’ केन्द्रमा कोरोना संक्रमित मतदाताका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोगले ७२ घन्टाभित्र कोभिड जाँच गरेको रिपोर्टका आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा दुई–दुईजनाका दरले स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत परिचालन गरिने सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले चुनावको अघिल्लो दिन मात्रै सत्ता पक्षलाई मतदान गर्ने चारजनालाई पूरक मतदाताका रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जब कि यसअघि १३ जेठमा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता संख्यामा प्रदेश सभाका ७९ जनाको मात्रै नामावली थियो । चुनावको अघिल्लो दिन मात्रै निर्वाचन आयोगले कारबाहीमा परेका जसपाका चारजना प्रदेश सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ । मतदाता संख्यामा थप गरिएका चारैजना जसपाका भए पनि उनीहरू मुख्यमन्त्री पोखरेलको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन् ।
अंकगणितमा विपक्षी गठबन्धन अगाडि
सरकारलाई विपक्षी गठबन्धनको चेतावनी ‘देश र जनतामा दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नू’
१.प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय संसद्मा पेस हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको छ । सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी बढ्दो छ । राज्ययन्त्रको स्वेच्छाचारी रूपमा दुरुपयोग हुँदै छ ।
२. प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना र प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा हामीले विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि कामकारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ । सरकारका संविधानविपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई पनि आग्रह गर्दछौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट